Hogaanka Cusub Ee Dalka Suudaan Oo Shaaca Ka Qaaday In Xabsiga Loo Taxaabayo Xubno Ka Tirsan Xukuumadii Madaxwayne Cumar Al Bashiir Iyo Waxyaabaha Loo Haysto
Monday, 15 April 2019 09:03
15/04/2019(BNN) Golaha cusub ee militariga Sudan ayaa waxay shaaca ka qaadeen in xabsiga loo taxaabay xubno muhim ah oo looga shakiyay in ay ku lug lahaayeen musuqmaasuq dhacay xilligii dowladii Cumar Al-Bashiir.
Af-hayeen golaha militariga ee dalkaasi ka arimiya Shams Ad-din Shanto, ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxaa uu ku sheegay in isbadal lagu sameeyay hoggaanka ciidamada.
Waxa uu intaa ku daray in dhowr ah hay'adaha dowladda dib u habayn lagu samayn doono.
Mar sii horeysay militariga ayaa waxay kulan la qaateen wakiilo ka kala socday xisbiyada siyaasadda iyo ururada si looga wadaxaajoodo xalka dhibaatada Sudan.
Afhayeen u hadlay golaha militariga Yassir al-Ata, ayaa dhankiisa sheegay in kulamadani looga gol lahaa sidii la isugu afgaran lahaa ra'isul wasaare madaxbanaan loona dhisi lahaa hanaan lagu maamulo dalka xilliga kala guurka.
Dhanka kale golaha militariga ee kumeelgaarka ah ee dalka Sudan ayaa waxay xayiraadii ka qaadeen warbaahinta iyo saxafiyiinta ajnabiga ah taasi oo horey loogu soo rogay.
Bayaan ay soo saareen golaha ayaa waxaa lagu sheegay in warbaahinta iyo wariyayaasha caalamiga ah ay xor u yihiin inay ka howlgalaan gudaha Sudan.
Mudaaharaadayaasha ayaa waxa ay dalbadeen in si dhaqsiyaha xukunka loogu wareejiyo dadka rayidka ah iyo inay sii joogi doonaan waddooy
More in this category: « DAAWO: Barnaamijka Kaftanka Siyaasada Oo Lagu Soo Bandhigay Hanjabaadii Uu Ismaaciil Cumar Geele U Soo Diray Cabdi Good Iyo Qodobo Kale Oo Xasaasiya Raysalwasaare Khayre Oo Soo Afmeeray Socdaalkiisii ,Maraykanka Iyo Waxyaalihii Uga Qabsoomay Waftigaasi Dawlada Somaliya Oo Lasoo Bandhigay »